Posted by တန်ခူး at 4:51 PM
ဟီးးး အခုမှပဲ 1st ရတော့တယ်
တန်ခူးကသာ ဟိုဟို ဒီဒီ လို့ဆိုတယ်... တွေးစရာတွေက တသီတတန်းကြီးရယ်...
မမတန်ခူးရေ.. မြန်မာကလေးတွေ တော်တာသိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ကလေးတွေက မျက်နှာလေးမော့ပြီး ငါကမြန်မာလို့ဂုဏ်ယူတတ်ကြပြီ။ ဆိုလို့ ပိုဝမ်းသာမိပါတယ်။
မီးမီးရဲ့ ကွိစိကွစနဲ့ တူတယ်..ဟဲဟဲ
သမီးဆုပေးပွဲကို မိဖ အနေနဲ့ သွားတက်တော့ အတန်းတိုင်းလိုလိုမှာ မြန်မာကလေးတွေ ဆုရကြတာ၊ မြန်မာနာမည်တွေကို ကြားရတယ် တန်ခူးရေ...
ဒါနဲ့ စင်ကာပူမှာ ထုတ်တဲ့ မြန်မာ မဂ္ဂဇင်းကို ပြောတာလားဟင်။
အဲဒါကြောင့်ပြောတာ..မြန်မာတွေတော်ပါတယ်လို့....။ ဟုတ်တယ်နော်အစ်မ ။ အဲဒီမျက်နှာဖုံးရှင်လေးတွေက မြန်မာပါလို့ပြောထားလို့သာ ယုံလိုက်ရတာ ။ မိုက်တယ် ။
အင်း..စလုံးက..မြန်မာ မဂ္ဂဇင်း အဖုံးတွေကတော့..ပြောစရာ..ပြောစရာ.. မြန်မာပြည်မှာ..ဒီလောက်လှတဲ့ ရှုခင်းတွေ ရှိနေတာများ..တခါတလေ လှည့်မသုံးဘူးလားမသိ..း)
မမရဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ ဖတ်ရင်း ဟိုတွေးဒီတွေးဖြစ်သွားတယ်.. ဒီမှာလည်း priority seat ကို ဖယ်ပေးဖို့ တွန့်တိုကြတယ်.. သူတို့ရှေ့မှာ ရပ်နေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်...
ကျနော်တို့ ရုံးက security ဖိုးဖိုးကြီးလည်း အမပြောသလိုပဲ..သူ့ကြည့်ရတာ ပျော်မြူးနေတာပဲ.. အမြဲတမ်း ဓာတ်လှေကားကို ပြေးဖွင့်ပေးတယ်.. မိုးရွာရင် ထီးယူလာခဲ့ဖို့ သတိပေးတယ်... စက်ဘီးနဲ့သွားတဲ့နေ့ဆို စက်ဘီးကိုစီးလို့ရအောင် အဆင်သင့် ထုတ်ပေးတယ်.. အဲဒီဖိုးဖိုးကြီးကိုတော့ ခင်တယ်.. :)
မြန်မာကလေးတွေ တော်တယ်ဆိုတာ ကြားရတော့ ၀မ်းသာလိုက်တာ.. အမရယ်.. :)
အိမ်အောက်ထပ်က အသိသမီးက အတန်းထဲမှာ ဒုတိယ၊ သူ့ထက်၂တန်းကြီးတဲ့ တစ်ကျောင်းထဲ တက်တဲ့ သူငယ်ချင်းသမီးလေးက အတန်းထဲမှာ အမြဲ ပထမတဲ့ ... မြန်မာခလေးတွေ တော်ကြပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းကတော့ သတိထားမိမှာပါ။ ဂုဏ်ယူစရာပါ။
ကိုပေါသမီးလေးက တော်ဆို ... အဖေတော် အမေတော်ကိုး ...ဟုတ် ...
ဒီက ထိုင်းကျောင်းမှာ တက်တဲ့ မြန်မာကလေးတွေလဲ အတန်းတိုင်းမှာ ပထမချည်းပဲဟ ... အဲဒါ တချက်ကတော့ ဂုဏ်ယူစရာပေပဲ... တန်ခူးတို့ စလုံးကိုရောက်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအရကို အဖေအမေတွေဆီက ပါတာကိုးးးး သိတယ်မဟုတ်လားးးး ကိုပေါတို့ ကိုကြည့် (တကယ်ပြောတာ)
agreed with above comments. They have good IQ genre from their parents and well supported by their educated parents. very lucky kids =)
ရသစုံတဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီလေး လာဖတ်သွားပါတယ်။
သေချာဖတ်ရင်းတွေးရင်း ...ဟိုဟိုဒီဒီထဲမှာ ဗြဟ္မစိုရ်တရား ၄-ပါး လုံး ပါနေတာ သတိထားလိုက်မိတယ်။
ပထမစာပိုဒ် ဖတ်ပြီး လူတွေ တအားအဆင့်မြင့်ကုန်လို့ ဗြဟ္မစိုရ်တရား အမှတ် ၄ ကို လက်ကိုင်ထားနေကြတာလား ... စဉ်းစားမိတယ်။
ဒုတိယစာပိုဒ်ကို ဖတ်ရတော့ မေတ္တာ တရားပဲလို့ တွေးမိပြန်တယ်။
အန်တီကြီးအကြောင်းကို ဖတ်ရတာ ... ကရုဏာသက်စရာ။
မြန်မာကလေးတွေ ထိပ်ဆုံးရောက်တဲ့အကြောင်း ကတော့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ မုဒိတာ ပွါးစရာပါပဲ။
အင်း ... နောက်ဆုံး မြန်မာမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးရှင် မင်းသမီးလေးတွေကိုတော့ ... မေတ္တာပဲ ထားရမလား၊ ကရုဏာပဲ သက်ရမလား၊ မုဒိတာပဲပွါးရမလား၊ တော်ပါပြီလေ ... အဆင့်အမြင့်ဆုံး ဥပေက္ခာထားလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲနေမှာလို့ တွေးရင်း ဟိုဟိုဒီဒီ ဖတ်ခြင်းကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါကြောင်း။ :)
ကြည့်တဲ့သူကကြည့်ရုံပေါ့ မမရေ.. ဟီးဟီး..
ဒီလို ဥပက္ခာတိုင်းပြည်မှာ နေရပေမဲ့ ကလေးတွေ ထူးချွန်တယ်ဆိုရင် အကျိုးရှိ အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ အမရေ။ ကြားရ သိရတာ ၀မ်းသာမိတယ်။
မြန်မာစိတ်ဓာတ်လေး ရင်ထဲမှာ ပျိုးထောင်နိုင်ရင်တော့ အလှမှာ အယဉ်ဆင့်တယ် ဆိုရပေါ့နော်။
ညီမရွှေခိုင်ရေ… ပထမဆုံးရောက်လာတာ ကျေးဇူးပါကွယ်…
အင်းးးး သက်ဝေရေ… ရင်ထဲမှာလဲ ဟိုဟိုဒီဒီ…
ဟုတ်ပါတယ်ညီမနွေးရေ… ကိုယ့်မျိုးရိုးဇာတိကို ဂုဏ်ယူတတ်လာတာ ဘယ်လောက်ဝမ်းသာစရာ အဖြစ်လဲနော်…
စူးရေ… စူးပြောမှ ကွိစိကွစိတောင် လွမ်းလာပြီ… ရေးဦးလေ…
ဂုဏ်ယူစရာပါကိုပေါရေ… ကိုပေါသမီးလေးအတွက်လဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်…
ကိုတောင်ငူရေ… ခုလို အားပေးတောင်းဆိုတာ ကျေးဇူးပါ…
ညီမရီတာရေ… ဟုတ်တယ်လေ… စလုံးက မြန်မာမဂ္ဂဇင်းပါ…
ညီမသန့် ရေ… မိုက်တာတော့ အရမ်းပဲ… အချင်းချင်းတောင် ငေးယူရတယ်..
ကေကလဲလေ… ရှူခင်းနဲ့ ဆို ဘယ်အရောင်းသွက်ပါ့မလဲ… ညီမလေးက သိပ်ရိုးတာပဲကွယ်…
နုရေ… နေကောင်းရဲ့လားညီမ… priority seatမရရင် အပင်ပန်းမခံနဲ့ နော်… ဂိတ်စကဖြစ်ဖြစ်သွားစီး… ပြောသာပြောရတယ်… အဲဒီက ဘယ်လိုမှန်းမသိဘူးနော်…ဟုတ်တယ်.. အမလဲ အဲလိုဖော်ရွေတဲ့ securityကြီးတွေဆို သိပ်ခင်တာ… မြန်မာကလေးတွေ တော်ကြပါတယ်ညီမရယ်… စိတ်မပူနဲ့ နော်…
သယ်ရင်းဆွိရေ… တို့ ကလေးတွေအလှည့်ကျ ဘယ်လိုလာမယ်မသိနော်… ရှေ့ က ကလေးတွေလျှောက်တဲ့လမ်း လျှောက်ကောင်းပါရဲ့…
မ ရေ… အဲဒီမှာလဲ တော်ကြတယ်ဆိုတာ ကြားရတော့ ကြက်သီးတွေတောင် ထ မိတယ်…
Anonymousရေ… ဟုတ်ပါတယ်… မိဘတွေရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ပံ့ပိုးမှုကလဲ အရေးကြီးတာပဲပေါ့… ပြီးတော့ မြန်မာတွေကိုက တော်တာလဲပါရဲ့နော်…
မေရေ… မေ့ကော်မန့် လေးဖတ်လိုက်ရမှ ဗြဟ္မစိုရ်တရား ၄-ပါး လုံး ပါနေတာ သတိထားမိတော့တယ်… မေ့ အမက တော်တယ်နော်…ဟိဟိ…
ကူးရေ… ကြည့်မိလို့ ရေးမိတာပေါ့ကွယ်… ဟိဟိ
ဥပက္ခာတိုင်းပြည်တဲ့လား ချိုသင်းရယ်… ရင်ထဲမှာ မကောင်းဘူး…
ညီမနှင်းဆီရေ… အမလဲ မြန်မာကလေးတွေ တော်တာကြားတိုင်း ကိုယ့်ရင်သွေးလေးတော်တာ ကြားရသလို ၀မ်းသာမိတယ်…
သားဆံပင်ကို ဘယ်သူညှပ်ပေးလဲ မေးမလို့။
မ ညှပ်ပေးတာလား၊ လှတယ်..
မျှော်သာ မျှော်.. ပေါ်မလာ သူရယ် စိမ်းကား...
မချစ်လို့ မုန်းလို့ ပုန်းနေသလား...
(ပိုစ့်အသစ်လာရှာတာ မတွေ့လို့ သီချင်းလေးဆိုပြီး ပြန်သွားပါပြီ...)